Podcast amin'ny Linux sy rindrambaiko maimaim-poana Avy amin'ny Linux
Ireto misy lisitra rehetra podcasts natokana ho an'ny free software, na amin'ny manontolo na amin'ny faritra sasany. Voalahatra araka ny abidia izy ireo. Ireo izay manana kintana dia tolo-kevitra, na amin'ny kalitaony na amin'ny fitohizany.
1 Amin'ny teny espaniola
2 Podcasts amin'ny teny anglisy
Amin'ny teny espaniola
Podcast DaboBlog: Dabo dia mpampiasa Debian ary ao amin'ny podcast-ny manana fizarana roa izy: Kernel Panic izay miresaka momba ny olana mifandraika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ary mitondra kooma aho, natokana ho an'ny tontolon'ny Apple. RSS MP3
Podcast Linux Hispano: Fanehoana manokana ny podcaster anao amin'ny lohahevitra ankehitriny miampy ny famerenana ny raharaham-pirenena miavaka indrindra. RSS MP3 sy OGG
Gimp100Podcast: podcast nomanin'ny mpamorona sary Venezoeliana Tatica, mpiara-miasa amin'ny tetikasa Fedora. Amin'ireto podcasts ireto dia asehony amin'ny alàlan'ny fampianarana an-tsary ny teknika samihafa hampiasana ny GIMP. RSS
Gpodcast: podcast momba ny zavatra rehetra misy rindrambaiko maimaimpoana, tena milamina sy sariaka. RSS MP3
Ny paoma mekanika: podcast izay ny tanjony dia ny hampiroborobo ny fizotry ny kolontsaina sy ny fahalalana malalaka. Izy io dia misy programa fohy 10 minitra izay mamintina lohahevitra manokana mifandraika amin'ny Kolontsaina Malalaka. RSS MP3 sy OGG
Misokatra enchilada: podcast amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, teknolojia amin'ny ankapobeny, kolontsaina ary maro hafa. RSS MP3
Raiki-tahotra ao anatin'ny fotony: dia podcast miresaka ny olana ankehitriny amin'ny Linux sy Free Software. Miatrika lohahevitra mahaliana azy ireo amin'ny fomba henjana izy ireo, saingy tsy manadino ny fahatsapana vazivazy. RSS MP3 RSS OGG
Penguins amin'ny tariby: dia podcast teknolojia mifantoka amin'ny fampiasana rindrambaiko Open Source. Ny mpikambana ao aminy dia mpikambana ao amin'ny Vondron'ireo mpampiasa Linux Aguascalientes (GUL * Ags) izay mety handray anjara mivantana na ankolaka. RSS MP3
Tuxinfo: podcast amin'ny fomba firesaka milamina mifandraika amin'ny lafiny maro mifandraika amin'ny rindrambaiko, programa, diso sns. RSS MP3
Tuxteno: podcast izay ifanakalozana lohahevitra samihafa mifandraika amin'ny rindrambaiko maimaimpoana. RSS MP3
Ny ondry elektronika: faritana ho ampahany amin'ny tolona an'arivony ho an'ny fahalalahana misaina, ny fahamarinana ary ny fitoviana ara-toekarena sy politika. RSS OGG
Podcasts amin'ny teny anglisy
Raha tsy olana aminao ny fiteny dia mety ho liana amin'ireto podcast manaraka ireto koa ianao:
Ny Linux Link Tech Show: Miaraha amin'i Kail, Allan, Patrick ary Dann mandritra ny fotoana mahafinaritra mierona! Hosted live, isaky ny Alarobia amin'ny 8 ora sy sasany alina US Time Time. RSS MP3 - RSS OGG
Podcast isan-kerinandro Distrowatch: Distrowatch - «Avereno ao anaty computing ny fahafinaretana amin'ny alàlan'ny Linux sy BSD». Araraoty ny famoahana distro farany ho an'ny GNU / Linux sy BSD. RSS MP3 - RSS OGG
Linux Action Show (*): Podcast iray lava be taloha, ny Linux Action Show dia nanjary fampisehoana video web mampiala voly. Chris sy Bryan dia nifindra tamin'ny endrika horonantsary fohy kokoa ary mamoaka ny feo ho format mp3 sy ogg ho an'ny sakafo RSS. Zahao ny tranonkalany raha hijery ny vaovaony farany sy ny fandefasana vaovao manaraka ireo lohahevitra mafana indrindra ao amin'ny fiarahamonina FOSS. RSS MP3 - RSS OGG
Handeha Linux Podcast (*): Ny fandehanana Linux dia ho an'ireo mpampiasa solosaina izay te hampiasa Linux fotsiny mba hahavitana zavatra. Na vaovao amin'ny Linux ianao, raha mifindra amin'ny Windows mankany Linux ianao, na raha mieritreritra ny hifindra any Linux, ity podcast sy tranokala ity dia hanome anao torohevitra azo ampiharina isan'andro amin'ny fampiasana Linux sy ny fampiharana azy. . Ny tanjonay dia ny hanampy hanamora ny fiainana Linux. RSS MP3 - RSS OGG
Linux mpandika lalàna (*): Linux Outlaws dia podcast ho an'ny mpampiasa Linux greenhorn sy veteran. Izahay dia mikendry ny handrakotra ny zava-drehetra ao amin'ny tontolon'ny Linux sy F / OSS na dia miala voly amin'ny fizotrany aza. Miresaka politika miaraka amina fieritreretana rindrambaiko Maimaimpoana izahay ary manandrana manampy anao miaraka amin'ny tetika mora ampiasaina sy programa mahafinaritra amin'ny ambaratonga fahaiza-manao rehetra. Koa satria tsy misy olona manelingelina ny alehany ho antsika, dia aleo miara-mifanampy isika. Mamoaka ny fahalalahana misafidy izy io. RSS MP3 - RSS OGG
Linux Basement: Avy amin'ny tranokala: «Linux Basement dia Podcast fampahalalana momba an'i Linux, rindrambaiko loharano misokatra ary teknolojia mamy hafa be dia be. Raha tianao ny rantsan-tongotr'akoho dia mety tsy ho anao ny Linux Basement. Fa raha tovolahy mahafinaritra ianao na gal te hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba ahafahan'ny Linux manao anao mahomby kokoa, mamorona rindrambaiko mangatsiaka ara-drariny, na angamba te-hivoaka kely fotsiny ianao, misoratra anarana amin'ny sakafonay ary mihaino. » RSS MP3
Filaharana GNU: Avy amin'ny lavenon'ny Paoma Ratsy Podcast Klaatu miakatra miaraka amin'ny Gnu World Order Ogg sy Speex Cast. Adala izy ary ampahafantarina azy ary mampianatra mahafinaritra ny olona. Aza adino ity mpilalao ity, na inona na inona ataonao. RSS OGG
FLOSS isan-kerinandro: Miaraha amin'i Randal Schwartz sy Leo Laporte rehefa mifanakalo hevitra momba ny lohahevitra ao amin'ny vondrom-piarahamonina FLOSS izy ireo ary manadinadina taratra mazava FLOSS malaza. RSS MP3
Fampisehoana lalàna momba ny fahalalahana rindrambaiko: Ny Software Freedom Law Show dia podcast iray isan-kerinandro momba ny olana ara-dalàna mifandraika amin'ny lozisialy Malalaka, Libre ary Open Source. Ireo mpampiantrano Bradley M. Kuhn sy Karen Sandler dia mifanakalo hevitra momba ireo lohahevitra mifandraika amin'izany ary mitafatafa amin'ireo olona manan-danja mikasika ny FOSS sy ny lalàna.
Ho an'ny lisitr'ireo podcast feno amin'ny teny Anglisy, dia mamporisika anao aho hitsidika Rohy Linux.
Fantatrao ve ny podcast iray izay tsy miseho amin'ity lisitra ity? Aza adino ny mamela anay fangatahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Podcasts amin'ny Linux sy rindrambaiko maimaim-poana